warkii.com » Ma Ahan 5 Iyo 7, Waa 10 Atiriisho Si Cad U Diideen Inee Seddexda Khans (SRK, Salman & Aamir) Filim La Sameyaan (+Sawiro)
Ma Ahan 5 Iyo 7, Waa 10 Atiriisho Si Cad U Diideen Inee Seddexda Khans (SRK, Salman & Aamir) Filim La Sameyaan (+Sawiro)
Seddexda Khans ee kala ah Shah Rukh Khan, Salman Khan iyo Aamir Khan waa atoorayaal 30 sano awood lahaayen iskoorada ugu badana sameyeen 30-kaas sano shaqsi walba oo Bollywood soo galo Ragg iyo Dumarba waxay ku hamiyaan inee mar uun shaashada kala soo muuqdeen seddexdaan atoore ee aan loo dhowaan karin maqaamkooda.
10 jeer kala duwan waxaa dhacday in atiriishooyinka Bollywoodka iska diideen filimo ay kala soo muuqan lahaayen seddexdaan atoore diidmada atiriishooyinkas marna duruuf ayaa u geysay oo ay ku diideen marna madax adeegooda iyo kaskooda ayee ku diideen.
Hadaba aan isla ogaano 10-ka jeer Khans-ka la shaqeyntooda la iska diiday una gaar ah atiriishooyinka kaliya hoos kaga bogo maqaalkan aan soo diyaarinay.
Shah Rukh Khan ayee Kuch Kuch Hota Hai la sameeyn laheed balse doorka Rani ayaa la siiyay weyna diiday iyadoo dalbatay doorka Kajol sidaas ayee ku weysay filimkaan weyn iyo atoore Superstar ah la shaqeyntiisa inkastoo markii dambe Badshah ay la sameysay (1999).
Ku talo gal ayee u diiday Aish Filimka Raja Hindustani ee All Time Blockbuster-ka noqday sababto ah Bollywoodka qiimo lama laheen iyada oo Model-ka iyo Fashion-ka ayee xiiseyn jirtay sidaa aawged Aamir Khan inee shaashads kala soo muuqato filimkaan weydiiday nasiib xumadeeda kadib Karisma Kapoor ayaa ka faaideysatay awooda fanka hindiya inee gacanta kudhigtana sabab ayuu u ahaa Filimkaan.
Karisma wacdarihii shaashada ay ku dhigtay waxuu sababay inee noqoto mida ugu awooda badan Bollywood, Filimfare Best Actress inee ku qaadatay abaal marin ah, mida ugu mushaarka badan iyo maqaamyo kale sido kale Aamir shaashada wey kaga saameyn badnaatay mashruucan hadaba Aish fursad weyn ayee fagtii hore iska lumisay ilaa maantana Aamir filim lama aysan sameeynin.
Quruxley Shilpa oo horey SRK ula sameeysay Baazigar ayaa mar labaad Badshah fursad loo siiyay inee la sameeyso xidigaan balse caqabad dhanka kooxda Filimka ayaa dhacday in filimka dib loo dhigay mudo dheer kadibna Shllpa wey ka niyad jabtay danteeda ayeena ka raacday waxaana lagu bedelay Twinkle Khanna oo ka qoomameyneyso Kuch kuch Hota Hai oo ay horey u diiday markaan Badshah ha iska fakin ayee istiri sidaasna ku sameeysay.
Kareena markii ugu horeysay waxaa la dhahay SRK atiriisho u noqo filimka Kal Ho Na Ho balse midaas ma aysan qiimeyn ee waxay qiimeysay mushaarkeeda weyna ku adkeysay saaxiibkeed Karan Johar oo qarash gareeyaha ahaa iyadoo dalbatay mushaar waali ah.
Bebo marar badan ayee ka shalaaysay ine filimkaan iska fakisay Preity Zinta ayaa ka faaideysatay oo ku noqotay atiriishada sanadka abaal marinta Best Actress ayee ku qaadataya waxuuna noqday mashruuc Classic ah ilaa maantana la jecel yahay.
Dhibaatada ay leedahay Khans-ka oo filimadooda la diida ayee kamid tahay in Priyanka Chopra iska diido Ghajino oo ah filimkii ugu horeeyay taariikhda fanka hindiya 100 Crore ganacsi ah sameeyo. Sababta ay kudiiday waxay ku sheegtay in doorka filimka ay ku laheed uu qancin waayey Aamir Khan inee shaashada kala soo muuqato fursad ahna wey lumisay.
Lasoco Qeybta Labaad 5 -ta dhiman ayaan soo bandhigeenaa..